Kodzero yemutambudzi yekupikisa kusarerekera kwake - Rabbi Michael Avraham
Kodzero yemutambudzi yekupikisa kusarerekera divi rimwe chete
Responsa > Category: Halacha > Kodzero yemutambudzi yekupikisa kusarerekera divi rimwe chete
kufara Yakabvunzwa 3 months ago
Sezvineiwo kana paine mitzvah yekuti munhu wese aite kuti mutambudzi aite zvisina musoro, saka pane mitzvah yekuti mutambudzi pachake asapikisa kusarerekera? Kana kuti mutambudzi achine kodzero here yekupikisa kusarerekera (uye kunyange kusvika pakuuraya mutsigiri)? Zvinoita sekuti hapana kutaurwa nezveizvi muMishnah Torah Mitemo yeMhondi uye Kuchengetwa kweMweya, Chitsauko A.
Mibvunzo ma tag: mutevereri
mikyab Vashandi Yakapindurwa 3 months ago
Nyaya iyi inowanikwa muvaimbi. The Gemara anoti dai akapidigura uye kuuraya Pinchas kubva munyika inotambudza angadai asina kusunungurwa. Uye muMalam F.A. Mahal mhondi inokurukura nezvekuwedzera kwemutemo uyu (ko nezve mhondi netsaona inouraya muponesi weropa, uye uyo anouraya mutumwa mundima yechipiri anofanirawo kukurukurwa).
Mutambudzi haana kodzero yekupikisa kusarerekera divi rimwe chete sezvo asina kodzero yekuuraya. Chaizvoizvo iye pachake aifanira kuzviuraya kubva mumamiriro ekutambudza (kana kuti zvechokwadi kurega kutambudza). Aya ndiwo matsananguriro andakaita pano masvondo mashoma apfuura mutemo kuti mutumwa muBD hamuna mvumo yekumuuraya nekuti mumhan’arirwi anofanira kuzviuraya. Kuuraya matsotsi mitzvah inoisirwa veruzhinji, uye mutumwa weB'D mutumwa wavose (kusanganisira vanotambudzwa).
Eli K. On Mhinduro kuna Bhaari Shem Tov uye kuputa, mweya waRabbi Nachman weBreslav
nondo On Mhinduro kuna Bhaari Shem Tov uye kuputa, mweya waRabbi Nachman weBreslav